နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: မေဆွိနှင့် သူ၏ သီချင်းများ
khin oo may January 26, 2009 at 12:40 AM
အချိန်တို အတွင်း အမြန်ပြူစုနိုင်တာ လေးစားမိတယ်။ အခြေခံကောင်းတာကိုး..
တစ်ခါတလေ တော့လည်း.. အလုပ်ဖြစ်သားဘဲ။
အဲဒီ address ကို သွားနားထောင်ဖြစ်ဘူးပါတယ။် အံသြမိသေးတယ်။ ဘယ်လိုများ သူစုဆောင်းနိုင်ပါလိမ့်လို့.
khin oo may January 26, 2009 at 12:43 AM
ထူးချွန်တဲ့ မဆွေ ခေါ် မေဆွိပါ
(မိဆွေ မို့လို့ မေဆွိလို့ခေါ်တယ် ထင်တာဘဲ။ မှားရင်လဲ စိတ်မရှိကြပါနဲ့ ။ရေးချင်တာ ရေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ပါ.
ဓါတ်ပုံ ကိုစန်းအောင်များလား..။ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်. စုံစမ်းကြည့်ဦးမှ
ATN January 26, 2009 at 12:46 AM
ဟုတ်တယ်လေ နံမည်ရင်းက ဆွေအေးမြင့် မို့လို့ သူငယ်ချင်းတွေက မိဆွေလို့ ခေါ်လို့ မေဆွိ ဖြစ်လာတာပဲ...
ကို boyz ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ တစုတစည်းထဲ နားထောင်နိုင်အောင် စုစည်းပေးထားလို့
May Moe January 26, 2009 at 12:48 AM
ကိုBoyz ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ဘယ်အဆိုတော်ရဲ့ သီချင်းတွေလာအုန်းမလဲ မျှော့ နေပါတယ်
Ko Boyz January 26, 2009 at 12:52 AM
- ယူကျူ့မှာ တင်ပေးတဲ့ ဦးစန်းအောင်ကို ကျွန်တော်က ပိုလို့တောင် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
- ဒဿလို မိန်းမ သီချင်းကို ငယ်ငယ်ကတည်းက နားထောင်ပြီးနောက်ပိုင်း ကြီးလာတော့ မကြားမိတော့ဘူး။ တိတ်ခွေခေတ်ဆိုတော့ ခွေတွေက မှိုတွေ တက်ကုန်တော့ ဘယ်လိုမှ ပြန်ဖွင့်လို့ မရနဲ့ နှမြောလိုက်တာ။ အခုမှ သူ့လင့်ခ်တွေ နောက်ကို သေချာ ပြန်လိုက်မှ အဟောင်းတွေ ပြန်တွေ့တယ်။ တိတ်သားတွေ တုန်တုန် တုန်တုန်နဲ့ PAL နဲ့ NTSC ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုတောင် သတိ ပြန်ရမိသေး။
- အထိန်းအသိမ်းကောင်းတဲ့ မြန်မာ့အသံမှာတော့ အခွေတွေ မာစတာတိတ်အနေနဲ့ ကျန်ဦးမယ် ထင်တာပဲ။ (ရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေ)။
Ko Boyz January 26, 2009 at 12:54 AM
မြင်းထိန်းငတာက ယောအတွင်းဝန်ရေးတဲ့ ဥတုဘောဇနကျမ်းကို ချီးမွမ်းသလိုမျိုး ဖြစ်နေမလားလို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးတော့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။ ကြိုက်ကြတယ်ဆိုလို့ ရင်ထဲက အလုံးကျသွားတယ်။
မီယာ January 26, 2009 at 1:04 AM
နောက်မေဆွိသီချင်းတွေ နားထောင်ချင်ရင် ဒီမှာ လာနားထောင်မယ်။ ဦးစန်းအောင်ရဲ့ ယူကျူ့ဆိုဒ် ကိုလည်း ရောက်ဖူးတယ်။ သီချင်းတွေ တော်တော် စုံတယ် တူးတူးသီချင်းလိုက်ရှာရင်းနဲ့လေ..ကိုဘ ကျေးဇူး
Summer Field January 26, 2009 at 3:30 AM
Ko Boyz: မိဆွေ(ဆွေအေးမြင့်) ဆိုတဲ့ အိမ်နံမည်ကို ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး (ဦး)ဝင်းညွန့်(ကွယ်လွန်) (ရုပ်ရှင်မင်းသား(ဦး)ဝင်းဦး ရဲ့အစ်ကို)က အဆိုတော်နံမည်အဖြစ် မှည့်ပေးခဲ့တာလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ရင်းနှီးသူတွေက မဆွေ(အသံမပီသူတွေက မရွှေ)လို့ခေါ်ကြတယ်။ သိသလောက်လေး ရွှီးသွားတာရတာကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ဟဲဟဲ..။ နောက်ပြီး ဒီလင့်လေးကို မဆွေက တရားစွဲချင် စွဲလို့ရအောင် အီးမေးလ်နဲ့ အကြောင်းကြားထားတယ်..။ တရားရုံးက ဆင့်ခေါ်စာ မကြာခင် မျှော့်...။
Moe Cho Thinn January 26, 2009 at 4:29 AM
မေဆွိ ပရိသတ် အစစ်ကြီးပါ။ အသံပါ မဟုတ်၊ မျက်နှာပါ ချိုလို့ ပိုကြိုက်မိတာ။ တခေတ်တယောက် ဆိုတာမျိုး။
ThuHninSee January 26, 2009 at 5:12 AM
ဟယ်..မေဆွိက ရင်လျားကြီးနဲ့နော်။ မေဆွိအသံကို စူးလို့မကြိုက်ဘူး။
khin oo may January 26, 2009 at 8:04 AM
မိုးချိူသင်းကစာရေးတာပါ ချိူသေးတယ်... အဲဒဲါနဲ့ အချိူတွေ များသွားလို့ အဲလိုဖြစ်သွားတာပါဘဲကွယ်။
Unknown January 26, 2009 at 6:03 PM
:P January 26, 2009 at 6:16 PM
၆ ခေါင်းစဉ်က "အဝေးမသွားနဲ့ အချစ်ရယ်" .. လားလို့။
ကိုကိုဘာလို့မုန်းတာလဲ နဲ့ မောင် သီချင်း ၂ ပုဒ်ကိုတော့ မေဆွိဆိုတာ နားပိုစွဲတယ်...။ ကျော်သူနဲ့မေဆွိ မုန်းရခက်ကြီး ရုပ်ရှင်ကို ၁၀ နှစ်သမီး လောက်ကတည်းက ကြည့်ထားပေမယ့် အရမ်းကြိုက်တော့ ခုထိမမေ့သေး...။
မေဆွိက မယ်သီတာလုပ်ပြီး ကနေတုန်း ဒသဂီရိဝင်လာပြီး မျက်နှာဖုံး ချွတ်လိုက်တော့ သူ့ကိုတဖက်သတ်ကြိုက်နေတဲ့ ကိုကျော်ဖေ ဖြစ်နေတော့ "ဟင်.. ကိုကျော်ဂီရိ.. အဲလေ.. ကိုကျော်ဖေ "ဆိုပြီး မေဆွိ ပြောလိုက်လို့ ရယ်ရတာတွေမှတ်မိနေတယ်..။
သက်ဝေ January 26, 2009 at 8:49 PM
သီချင်းနာမည်လေး တချို့ပြောပြပါရစေ...
၀၅ - ဒဿလို မိန်းမ
၀၆ - အဝေးမသွားနဲ့အချစ်ရယ်
၀၇ - ဒဿလို မိန်းမ
၁၆ - ကျေးစေတမန်
သက်ဝေ January 26, 2009 at 8:50 PM
မေဆွိသီချင်းတွေ ပြန်နားထောင်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်
:P January 26, 2009 at 10:08 PM
ကိုဘွိုက်ဇ်.. ညနေစောင်းကတည်းက MTV ထိုင်ကြည့်နေတာ အားလုံးပြီးသွားပြီ..။ သီချင်းဆို နားထောင်ရတာပဲကြိုက်တာ၊ ရုပ်မကြည့်ဖြစ်တာများတယ်..။ ဒီတစ်ခါတော့ 1980 ကျော်က
ပုံတွေပါပါတော့ ကြည့်ဖြစ်တယ်..။ငယ်ငယ်တုံးက ကိုလည်း သတိရသွားတယ်...။
ကဘ ကိုလည်း ကျးဇူးတင်ပါတယ်.. အတည်၊ အတည်၊ အတည်
၂၂ က အနမ်းပန်း မှန်ပါတယ်..၊ မနဲ့မောင်က အန်တီနွဲ့ယဉ်ဝင်း အရင်ဆိုသလားလို့ ။ အန်တီနွဲ့ယဉ်ဝင်း အသံကို ပိုနားစွဲနေတယ်..။
khin oo may January 26, 2009 at 10:24 PM
26 Jan 09, 22:23
ုkom: တို့က..ကိုဘကို သိတ်ကူညီချင်တာ မကူညီတတ်လို့ ခက်နေတာ..ကျေဇူးသက်ဝေ (သုံးခါပြောသည်)
ုkom: ကိုကျော်ဂီရိ.. အဲလေ.. ကိုကျော်ဖေ "ဆိုပြီး မေဆွိ ပြောလိုက်လို့ (အဲဒီအထိ တော့မမှတ်မိဘူးကွယ်။. စင်စင် မှတ်ညဥက် ကလဲကျောင်းစာ ကလွဲရင်အားလုံးကောင်းတယ်ထင်ရဲ့။ သက်ဝေ ကတော့စူပါမန်းဘဲ.။ တို့ကသိတ်ကူညီချင်တာ
26 Jan 09, 22:21
ုkom: shwenyi ကလာပြန်ပြီ..တို့ဆို အော်..ဂျီကို ဖွင့်ကို မဖွင့်ရဲဘူ.. ဟီးဟီးး အဲလိုဖြစ်မှာစိုးလို့။ မုန်းရခက်ကြီး ထဲက သကြန်ခန်းမှာ တို့အစ်ကိုမ်ကွဲ အမေရီက0ကားမှာ အခုနေတဲ့တစ်ယောက် ပါတယ။် မန်တပ်မှာလေး....ဟီ.
ခင်မင်းဇော် January 26, 2009 at 11:40 PM
စင်စင်ပြောတာ မှန်တယ် ။ မနဲ့ မောင်က နွဲ့ယဉ်ဝင်းရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းလေ။
သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာ။ သူဆိုတာ ပိုကောင်းတယ်။ နောက် အမကတော့ မေဆွိအသံကို စူးလို့ သိပ်မကြိုက်ခဲ့ဘူး။ ဒါတော့မွန်မွန်နဲ့တူတယ်။ ဒါပေမယ့် မောင် တို့ ဒဿလို မိန်းမတို့မှာတော့ ကောင်းသား မစူးဘူး။ လေစိမ်းတွေ တိုက်နေတယ် အခွေလဲ ကောင်းတာပဲ။ နောက် မပြန်နဲ့ဦး အချစ်ဆုံး နေမွန်းမတည့်မီ ... ဘာညာ ပါတဲ့ အခွေလဲ တော်တော်ကောင်းတယ်။ အတ္တဆူး ဆိုတဲ့သီချင်းကလဲ ပေါက်တာပဲ။ ဟဲဟဲ ပြောရရင် ပို့စ်တခု ဖြစ်သွားတော့မယ်။ ဘွိုင်းဇ်ကိုအားနာလို့ ရပ်လိုက်ပြီ..( သိပ်မကြိုက်လို့ပဲနော် အကုန်မှတ်မိတယ် ဟိ)
မောင် သီချင်းက ကျွန်တော် မိသားစုမှာ အတော်ကို နားထောင်ဖြစ်တယ်ဗျ...
အဖေတော်တော်ကြိုက်တယ်။ အဲဒီသီချင်းကြောင့် (တစ်ချိန်က)ပြည့်ဝစားတော်ဆက်မှာ ပန်းကုံးဖိုး ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတာ မရေတွက်နိုင်အောင်ပါ...
ThuHninSee January 28, 2009 at 2:32 PM
ထပ်မန့်လိုက်အုံးမယ်။ မုန်းရခက်ကြီးထဲက.. မေဆွိဆိုတာလေ..
ထမင်းစားဝိုင်းမှာ ခွေးဝင်သည် ပျိုမေရွံပါသည်။ သူ့နားကပ်ရင် ၀ဲစော်နံ
ပျိုပျို မစားချင်သည်... ဆိုလား။ ရီရလို့မှတ်မိနေတယ်။
:P January 28, 2009 at 2:46 PM
ဟုတ်တယ်.. ကျော်သူကလည်း ပြန်ဆိုတယ်..။
ထမင်းစားဝိုင်းမှာ ခွေးဝင်သည် ကိုကို ရွံပါသည်။ သူ့နားကပ်ရင် ၀ဲစော်ညှီ
မမကေအိုအမ်.. သာမီး ဘာလို့ အဲလောက်မှတ်မိနေလဲဆိုတော့
အိမ်မှာက အဲဒီဝတ္ထု (ကြူမွှေးရေးတာ) ကို အပိုင်ရှိတော့ အထပ်ထပ်ဖတ်ပြီးသား၊ ရုပ်ရှင်ပါကြည့်လိုက်တော့ ပိုမှတ်မိနေတာ။
Ko Boyz January 29, 2009 at 11:41 AM
မီယာ - နောက်ထပ်ကို အလ်လွန်းဝါ သီချင်းတွေ စုမလား စဉ်းစားနေပါတယ်။
Summer Field - ကို KMA များလား မသိဘူး။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ သမ္ဗာန်စာ(Summon Letter) လို့ ခေါ်တဲ့ ဆင့်စာတော့ မလာသေးဘူးဗျ...။ စောင့်နေတာ။ လာရင်လဲ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်ကို ကိုယ့်ကို အရေးတယူ လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ...။
သုနှင်းဆီ - တီသုရေ...။ အခုက ရင်လျားတာ ဖက်ရှင်ဗျန့်...။ မဆွေက အသံစူးပေမယ့် နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်...။
မချိုသင်း - အကြိုက်တူနေတာ တွေ့ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသားပါတယ်။ ကျွန်တော် သီချင်းတွေ နားထောင်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ ကိုထီးပြီးရင် သူက ဒုတိယ ကျွန်တော့်ကို အလွမ်းမိုးဆုံးပဲ။
ဆင်ဆင် - သီချင်းခေါင်းစဉ် ပြင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ သေချာအောင် ထပ်ရှာလိုက်ပါမယ်။ သေချာရင် ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်ပြင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ မုန်းရခက်ကြီးကတော့ ကျွန်တော့်အဒေါ်တွေ ကြူမွေး ၀တ္ထု ဖတ်ပြီးကတည်းက သူတို့ ပြောနေတာ ကြားတာ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့ အဲဒီ ထမင်းစားခန်းမှာ ပြောတဲ့ စာသားတွေကို ရုပ်ရှင်ကနေ အိမ်ပြန်လာတာတောင် တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့ အထိ စားမြုံ့ပြန်လို့ မဆုံးသေးဘူး...။ ကျွန်တော် မှတ်မိတာကတော့ “ထမင်းစားချိန် ခွေးဝင်သည်။ ပျိုပျို မစားချင်ဘု” ဆိုလားပဲ...။ မနဲ့မောင်ကတော့ အန်တီ နွဲ့ယဉ်ဝင်း အရင်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် အန်တီ့အသံက မေဆွိ အသံထက်ကို စူးနေလို့ သိပ်မကြိုက်သလိုပဲ။ နောက်ပြီး မေဆွိ ပြန်ဆိုတာမှ အတီးပိုငးက ပိုသေသပ်လာသလို မေဆွိရဲ့ အဆိုပညာ ပါးနပ်မှုကြောင့် မေဆွိ ဗားရှင်းကို ကျွန်တော် ပိုကြိုက်ပါတယ်။
မသက်ဝေ - သီချင်းခေါင်းစဉ်များ ပြင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ သေချာအောင် စုံစမ်းလိုက်ပြီး ပြန်ပြင်လိုက်ပါ့မယ်။
ခင်မင်းဇော် - အစ်မရေ.. သူစူးတာက ပညာပါပါနဲ့ အဆိုန့ ထိန်းသွားတော့ သာယာနာပျော်ဖွယ် အသံဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ...။ အစ်မပြောတဲ့ သီချင်းတွေ အချိန်ရရင် ထပ်ရှာပြီး ဖြည့်လိုက်မယ်...။ လေစိမ်းတွေ တိုက်နေတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလဲ အထင်ကရပဲနော်...။
ဖိုးသိန်း - ပန်းကုံးဖိုး နှမြောတာလား ... ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပန်းကုံးတွေ မစွပ်လိုက်ရလို့ မကျေမနပ်နဲ့ ရင်ဖွင့်နေတာလားဗျာ...။
ဆင်ဆင် - ကိုကျော်ဂီရကတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဟာသအတွက် ကျေးဇူးပါ...။
Summer Field January 30, 2009 at 1:43 PM
'KOM'ပြောတော့ ကျုံတိုင်းသားဆို..။ ပညာရှိများ တွေးကြည့်တာထက် ပြေးကြည့်တာက ပိုမှန်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ စီဘောက်မှာ ဟင့်ပေးခဲ့တာကိုများ..သွား လူဆိုး..။ ကွန်မင့်လွယ်လွယ်ပေးလို့ မရအောင် လုပ်ထားတာ ကောင်းလား..။
Ko Boyz January 30, 2009 at 3:39 PM
Summer Field - ကွန်မင့်များ ဘာပါတ်ဝါ့ဒ်တွေ ဘာတွေမှ ထည့်စရာ မလိုအောင်ကို လုပ်ထားတပါ။ သူများကွန်မန့် (ဥပမာ - တီဇက်အေကို ပြောခြင်းမဟုတ်) မှာဆို မန့်ချင်တိုင်း မန့်လို့ မရဘူးဗျန့်။ သူပြထားတဲ့ ယင်းဂလိပ်စာတွေ မှန်အောင် ရိုက်နိုင်မှ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ စာကို တင်ခွင့်ပြုတာကလား။ တစ်ချို့ စန်းစန်းတင့် ဖြစ်တဲ့သူတွေဆို ကော်မန့်ကို ဒီအတိုင်း တင်မပေးပဲ သူတို့ သဘောကျတဲ့ဟာမှ၊ လက်ခဲ့တဲ့ဟာမှ တင်ခွင့်ပြုတာ တစ်ပုံကြီးပါ။
အတိုချုံးပြောရရင်တော့ ကွန်မန့်တင်တာမှာ ကျွန်တော့်ဆီက ကွန်မန့်တင်ဖို့က လွတ်လပ်မှု အပြည့်ဝဆုံး ၊ ဒီမိုကရေစီ အရှိဆုံးလို့ ပြောပါရစေ...။
ခွိခွိခွိ... ကိုယ့်ဖြေရှင်းချက်ကို ပြန်ဖတ်ပြီး ဟာသတွေ ဖြစ်နေတယ်။
khin oo may February 1, 2009 at 6:55 PM
Ko Boyz February 1, 2009 at 8:26 PM
စန်းစန်းတင့် = sensitive
khin oo may February 1, 2009 at 10:16 PM
နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ ဟု စိတ်ထဲမှ ကြုံးဝါးသွားသည်။
Ko Boyz February 1, 2009 at 10:40 PM
မွန်သိတယ်။ အမ်းမားက မွန်မွန်နဲ့ ပေါင်းပြီး မသိတာတော့ ညံ့တာပေါ့။
Rita December 29, 2011 at 2:20 PM
Ko Boyz June 6, 2013 at 4:26 PM
:P June 6, 2013 at 7:25 PM
အောင်မာ.. ခုမှ တစ်ရေးနိုး